Kusho ubuchwepheshe blockchain kwakhula kanjani 2018? - Blockchain Izindaba
Kusho ubuchwepheshe blockchain kwakhula kanjani 2018?
Eminyakeni ecishe ibe ngu eyishumi edlule abantu wafumana kuqala mayelana ubuchwepheshe blockchain. Kusuka lapho, abamele izimboni ezahlukene Kuye nokuqapha ukuthuthukiswa lobu buchwepheshe ukuthola ukusetshenziswa ngoba emasimini abo. Ngaphezu kwalokho, izinkampani esungulwe kakhulu ukuhlanganisa ku imifelandawonye ezifana Enterprise Ethereum Alliance (EEE), R3, futhi Hyperledger Project, uzenzele ezintsha blockchain ezisekelwe. Sifuna ukwabelana imibono lochwepheshe on ukuthuthukisa blockchain e 2018, futhi lapho izinkampani uhlela ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha esikhathini esizayo esiseduze.
Blockchain Technology Thuthukisa
Njengoba Forbes uthi blockchain luzokuba nomthelela ezahlukene ngendlela abaqashi ukuhlola ukhetho bese ugcwalisa izikhala. Ngo 2018, kuyoba ezisekelweni eziningi emakethe efana APPII, enikeza abasebenzisi nge “smart” amaphrofayli kunethiwekhi blockchain. Ngeke nje lezi amaphrofayli aqukethe abasebenzisi iCV, kodwa futhi ulwazi mayelana kokufaneleka career abo nokufeza, izitifiketi ukuncintisana izinhlelo zemfundo kanye nanoma yimiphi eminye imininingwane ebalulekile. Ngaphandle, izikhungo zemfundo kanye nabaqashi bayokwazi ukufinyelela amaphrofayli ukuqinisekisa lolu lwazi, futhi ngokwenza kanjalo walenza okunokwethenjelwa ngokugcwele.
Umbiko wamuva kusukela IDC Impilo Insights - ucwaningo kanye Consulting ngokuqinile - uphawula ukuthi eminyakeni embalwa ezayo ubuchwepheshe blockchain izosetshenziswa ezindaweni eziningi kwezempilo. Isifundo “Isibikezelo sezulu sezinsuku Izwe umkhakha kwezempilo 2018” ubikezela ukuthi ngonyaka ozayo 20% izinhlangano uzobe ngenkuthalo ekuthuthukiseni blockchain amaphrojekthi. ngu 2020 blockchain sizosetshenziswa ukuphathwa zokusebenza, kanye nokugcina yolwazi iziguli. I Skycell inkampani sibonelo esigqamile kanjani blockchain futhi IoT ukunikela kahle kokuthengwa kwempahla ukuze abekho embonini yokwenziwa kwemithi, okuhlanganisa izinkokhelo, sokukhokha, futhi umshwalense.
Ngezinye efanayo abahlanganyeli isikhathi yephrojekthi Blockchain Research Institute, okuyinto zihlanganisa IBM, Pepsi Co., futhi FedEx, Lindela ukuthi blockchain ukusebenza kule yokukhiqiza kanye ukukhiqizwa izimboni, ngeke babe nje Ithuluzi eliyinhloko, kodwa ngeke Ihlanganisa isizukulwane inguquko digital yesibili, ne owokuqala kokuba lo Ukusungulwa kwe-Internet. izinkampani ezifana Foxconn izosebenzisa blockchain ukuqapha ukuthengiselana zinamanzi chain.
umqondisi Blockchain at LOOMIA uSawule Lederer ukholelwa ukuthi 2018 sizobona izinkampani ukuthi isungule, ukuthi kakade wakwazi bazibonakalise ezimakethe ehlukahlukene, bazosungula amasevisi umshayeli kanye nemikhiqizo esekelwe blockchain yomphakathi.
izinkampani ezasungulwa siqaphele kakhulu ukuthi izikhungo ukuthi indiva internet in the 90s baqothulwa zokuqala kuwebhu, futhi bengafuni ukuba efanayo bengakulindele Lapho kufika ubuchwepheshe blockchain. Bayaqaphela ukuthi noma uqale ukusebenzisa i-blockchain noma bahambe ngendlela sibe ibhayisikobho eshisa izikhotha.
Ngenxa blockchain, ukusetshenziswa izinkontileka smart zizoshintsha kakhulu. Kugcine ehlobo IT giant IBM, American Yemshwalense AIG, kanye nenkampani yezezimali Standard Chartered PLC igcwaliswe umshayeli ukuhlolwa blockchain ezisekelwe “smart” umshwalense ngamazwe. Ngokokuqala ngqá blockchain futhi smart izinkontileka yasetshenziswa kule mboni, okuzokwenza athuthukise le phrojekthi ngezinga elikhulu e 2018. Oliver Bussmann uyaqiniseka ukuthi blockchain siyashintsha hhayi kuphela yemikhakha zezimali kanye yomshuwalense kodwa kuzophinda nomthelela kwezinye izimboni. Mayelana nalokhu, ngonyaka ozayo izinkampani eziningi kuyodingeka ukuzivumelanisa onobuhle zabo zebhizinisi nezidingo ezimakethe ezintsha.
Ezweni lapho ezokuhwebelana ayabaluleka akusebenzi, izinkampani kuyodingeka bafunde ayeke ukucabanga e silos futhi avuleke kakhudlwana ukuba abe abalingani zemvelo noma ezisekelweni ebanzi. Lokho, esikhundleni salokho, kusho kokunquma ukuthi iziphi izinhlobo onobuhle ibhizinisi bafuna - ngabe kungcono platform udlala, kudlala umkhiqizo, amasu ongumninimandla onke-siteshi, njalo njalo.
Oliver Bussmann - umongameli hhayi ngaphandle kwenzuzo Crypto Valley Association kanye nowabe CIO at UBS - waphawula ukuthi amabhange amakhulu nentshisekelo izinhlelo blockchain yokukhokha, ngoba elingwa izinzuzo blockchain kuletha ngokuya real-time ukucutshungulwa, amaphrofayli ingozi ephansi, izindleko ephansi kanye obala. Usomabhizinisi wabuye wathi ku 2017, izinkampani waba nelungelo ukusebenza kwase banaka kakhudlwana nokuningi tinhlobo letinsha namasevisi blockchain kwenza, ikakhulukazi uma blockchain kuhlangene IoT kanye AI. Ngokusho Bussman, Ngenxa yokuthi lokhu sekwandile kuzoqhubeka 2018, njengoba Umbiko wamuva nje kuyi-Forbes uthi kanye. Imvelo ngekhodi futhi endlalekile ka blockchain iyasiza nokuqapha isibalo esandayo lamadivayisi IoT. Ngakho, lo mbiko uphawula ukuthi amandla ama esetshenziselwa bitcoins izimayini kungasetshenziselwa ukuvikela amakhaya smart kusukela Cyber-abaphangi isizukulwane esisha.
I-CEO ye-Nucleus Vision, Abhishek Pitti uchaza izici blockchain ezosiza ekuthuthukiseni namandla yokuvikela idatha. Yena okholwa ukuthi 2018, kule ndawo uzobona izinzuzo ezinkulu kakhulu ezivela ukuthuthukiswa mutual ubuchwepheshe obufana indlela yokubhala efihla incazelo, ukubethela, futhi blockchain:
Blockchain iyithuluzi elinamandla ongaletha ushintsho omuhle ezimbonini eziningi, futhi thina kulibona ukuthi kwentuthuko ekhona ukubethela ubuchwepheshe kanye indlela yokubhala efihla incazelo, kuhambisana blockchain, kuyoba iresiphi for impumelelo embonini yokuvikeleka e 2018. Ngokwesibonelo, the Equifax idatha Hack yinto edingekayo okungaphezu nje blockchain ukuthi kuvinjelwe ke. Nakuba ubuchwepheshe blockchain bebengaba amakhasimende kwasiza ngempela bagomela ukulawula okuningi kudatha yabo siqu ephethwe yinkampani, imikhuba emibi lwezokuphepha babezobe kubenza sengozini, noma ngaphandle blockchain. Lapho izici zokuphepha blockchain ngeke ngempela angene siqu sabo siyoba elihlangana zabo IoT. Njengoba inani elandayo, lamadivayisi axhumene, 2018 Uzodinga blockchain sika zokuphepha izakhiwo ukuvikela IoT izicelo kanye nabasebenzisi kusuka eyinkimbinkimbi idatha izimfa. Ngiyakholelwa ukuthi 2017 kwakumane trailer lokho okuzayo e 2018 kuyo yonke blockchain ecosystem kanye wemboni.
Dmitriy Zhulin, umsunguli we-ins Ecosystem, ulindele ukubona blockchain abe yokutholwa kabanzi ubuchwepheshe amakhulu 2018, nokuguqula wonke zaziziningi izimboni kusukela kumasevisi zezimali kanye okudayisa, ukuze Logistics and imithi. Ngesikhathi esifanayo Max Kordek, co-umsunguli Lisk inkampani, ukholelwa ukuthi singalindela ngentuthuko eziningi ekwengameleni blockchain inethiwekhi 2018, okuzobe ahlanganisa entsha izindlela ukuvumelana kanye nezimiso Ukuvuselela senza izinqumo mayelana inethiwekhi upgrades:
Nge Bitcoin sika Umsebenzisi Kuvulwa Soft Fork (UASF), noma Lisk sika Amanxusa-Ubufakazi-of-Esigxotsheni ukuvumelana izindlela, singalindela izixazululo esizayo ezisiza benze izinqumo ezibucayi ngekusasa iphrojekthi sika. Udaba lokuhlolwa kwesifo scalability kuyoba esinye isihloko esishisayo Ngokuqhubeka ku 2018. Yamanje blockchain nezinhlaka Namanje emuva uma iqhathaniswa ngesivinini kuthengiselana ezihlinzekwa izimbangi bendabuko ezifana Visa noma Mastercard. Imboni uzodinga ukuthola izixazululo ezintsha kanye nokwandisa ikhodi kuze kube seqophelweni lokuba amazinga ukuncintisana Ukuphendula bungatholakala. Lona omunye izizathu zokuthi kungani Lisk kuyinto sidechains ekusebenziseni. Ukuqinisekisa kahle basakaza umsebenzi wenethiwekhi ekuthuthukiseni processing speed kunethiwekhi kubalulekile.
Blockchain Technology Thuthukisa 2018
Kuvele indaba ezifundisayo ...
Thumela Previous:ukuthuthukiswa Cryptocurrency emakethe e 2018
Thumela Landelayo:I izenzakalo ezibaluleke kakhulu 2017 ku Crypto Community